शुद्ध हिमाली खाद्यान्न काठमाडौँको भान्सा-भान्सामा पुर्याउँदै ! – HamroKatha
उनले आफ्नो गाउँको भान्सा र यहाँको भान्सामा आकाश जमिनको फरक पाए । किनकी गाउँको खानाको त्यो मिठो स्वाद यहाँ कहाँ पाईन्थ्यो र । हरेक खाद्यान्नमा मिसावट अनी बिषादीयुक्त । त्यसपछि उनलाई लाग्यो गाउँको त्यो मिठो स्वाद यहाँका शहरका मान्छेलाई किन नचखाउने ?
हाम्रो कथा २०७६ जेठ ९ गते १७:०४
यो एउटा यस्तो व्यवसायको कथा हो, जुन धैर्यता र मेहनतले गर्दा नैं दिन प्रति दिन सफलता तिर लम्किरहेको छ । हिमाल तथा पहाडका उत्पादन काठमाण्डुका मान्छेलाई चखाउने ईच्छा कै कारण यो व्यवसायको जन्म भयो । शुद्ध उत्पादन, बिषादी नमिसिएको, त्यो पनि कर्णालीको उत्पादन । कसलाई मन पर्दैन र ! कर्णाली क्षेत्रमा उत्पादन भएको खाद्यान्न पाईने ठाउँ हो अनामनगरको हिमाली प्रोडक्ट ट्रेडिङग् सेन्टर ।
हिमाल तथा पहाडका शुद्ध र अर्ग्यानिक खाद्यान्नलाई काठमाण्डु उपत्यकाको भान्सामा सहज पहुँच पुर्याउने श्रेयकर्ता हुन् शिव रावत । जुम्लामा जन्मे–हुर्केका रावत एसएलसी सकेर उच्च शिक्षाका लागि काठमाण्डु छिरे । उनले आफ्नो गाउँको भान्सा र यहाँको भान्सामा आकाश जमिनको फरक पाए । किनकी गाउँको खानाको त्यो मिठो स्वाद यहाँ कहाँ पाईन्थ्यो र । हरेक खाद्यान्नमा मिसावट अनी बिषादीयुक्त । त्यसपछि उनलाई लाग्यो गाउँको त्यो मिठो स्वाद यहाँका शहरका मान्छेलाई किन नचखाउने ?
आफ्नो गाउँमा उत्पादन भएको सिमीबाट उनले व्यवसायीक यात्राको संघर्ष थालेका थिए । यो संघर्ष त्यति सजिलो भने थिएन । यसैपनि हिमाल पहाडका उत्पादनको लागत खर्च बढी हुन्छ । त्यसमाथि कर्णाली क्षेत्रबाट काठमाण्डु सम्म आईपुग्दाको ढुवानी खर्च र प्रशोधन/प्याकेजिङको लागत जोड्दा महँगो मुल्य पर्न जानेनैं भयो । उत्पादनका सम्बन्धमा यहाँका मानिसहरु जानकार थिएनन् । उस्तै खालको खाद्यन्न जुन तराई वा अन्य मुलुकबाट भित्रिएका हुन्छन् । ति बजारमा सस्तोमा पाईन्थ्यो । एउटै खाद्यान्नलाई किन महँगो मुल्यमा किन्ने भनेर मानिसहरु प्रतिप्रश्न गर्नेगर्थे ।
हिमाली प्रोडक्ट ट्रेडिङग् सेन्टरका संचालक शिवलाल राउत बताउँछन् , “क्वालिटी दिनका लागी आफ्नो प्रोडक्टलाई बजारका औसत सामानसंग तुलना गर्ने कुरा आउदैन I क्वालिटीको खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु आफ्नो मूल लक्ष्य भए पछी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने किसिमको व्यवसाय कहिले बनेन हिमाली प्रोडक्ट I”
आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गरौंन भन्नेहरुबाटै उनको व्यबसाय मौलायो । सुरु–सुरुमा उनी आफ्नो प्रोडक्ट बोक्दै विभिन्न होलसेल र सुपरमार्केट धाउँथे । तर त्यहाँबाट राम्रो प्रतिक्रिया आउन्नथ्यो । एक बर्षअघि उनले अनामनगरमा आउटलेट खोलेर विक्रि सुरु गरे । त्यसपछि भने राम्रो व्यापार हुन थाल्यो । अहिले त अनलाईन व्यवसायीहरुले समेत उनको उत्पादन लिन थालेका छन् । आफ्नै नियमित ग्राहक त छँदैछन् । अब भने नयाँ ढंगले मार्केटिङ गर्ने सोचाईमा छन् उनी ।
प्याकेजिङ र प्रशोधनको काम भने उनी बालुवाटारमा गर्छन् । त्यहाँ उनले बोक्रा फाल्ने, च्याँख्ला बनाउने, पिठो पिस्ने लगायतका प्रशोधनका कामहरु गर्न तीन वटा मेशिन राखेका छन् । यहिंबाट प्रशोधन र प्याकेजिङ गरेर सामानहरु विक्रिका लागि अनामनगर आउटलेट र अरु सम्पर्क भएका मार्केटमा जान्छन् । सामानको बजार प्रवर्द्धनका लागि उनी देशका विभिन्न ठाउँमा हुने खाद्यान्न मेलाहरुमा समेत पुग्ने गरेका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले भृकुटिमण्डप, भैरहवा र जनकपुरमा आयोजना गरेको खाद्यान्न मेलाहरुमा उनको उत्पादनले प्रशोधित खाद्य उत्पादन तर्फ प्रथम पुरस्कार पनि प्राप्त गर्यो । जुन पुरस्कारका कारण उनका लागि व्यवसायीक यात्रामा अझ अघि बढ्न ऊर्जा मिल्यो ।
अहिले उनकोमा धेरै प्रकारका गाउँका शुद्ध खाद्यान्न पाईन्छन् । एक किलोको २० हजार रुपैंया पर्ने गुच्ची च्याउ मात्र हैन निकै चर्चित जुम्लाको मार्सी चामल समेत छ यहाँ । सिमी, सिमीको दाल, ओखर, स्याउ, स्याउको चाना, फापर–मकै–कोदोको पिठो, च्यांख्ला, जौको सातु र जौको च्यांख्ला, टिम्मुर, भटमास लगायत थुप्रै खाद्यान्नहरु छन् । साथै उनले सोलुखुम्बु, ईलाम लगायतका अरु विभिन्न हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका उत्पादन समेत विक्रिका लागि राखेका छन् ।
शिवलाल राउत व्यक्त गर्दछन्, “अब मार्केटिंगका निम्ति विभिन्न मेला र महोत्सवमा सहभागी भई आफुलाई अघि सार्दैछौँ I”
उनको यो प्रयासबाट आफु सहित पाँच जनाले रोजगारी पाएका छन् । सिजनअनुसार आम्दानीमा घट-बढ हुन्छ । तर सामान्यतया मासिक २ देखि ४ लाख रुपैंयासम्मको व्यापार हुन्छ । उनी अब आफ्नो व्यवसायको दायरा अझ बढाउने सोचमा छन् । आफुले सुरु गरेको व्यवसाय उकालो लाग्दै गर्दा उनी निकै खुशी छन् । त्यो भन्दा बढी त जुन उद्देश्यका साथ उनले व्यवसाय सुरु गरे त्यसमा सफल भए । त्यो नैं उनको सन्तुष्टि हो ।